Windows DVD Onye kere VOB: Olee Ọkụ VOB Na Windows DVD Onye kere
Chọrọ ọkụ VOB faịlụ na Windows DVD Onye kere, otú ị nwere ike igwu ha mgbe ọkpụkpọ DVD? N'ụzọ dị mwute, Windows DVD Onye kere na-adịghị aghọta VOB video usoro. Ị nwere iji tọghata VOB video faịlụ ka a dakọtara usoro dị WMV faịlụ maka agbakwunye n'ime Windows DVD Onye kere ọma. Alternatively, i nwere ike iji a mma omume ka ị kpọmkwem ọkụ VOB faịlụ n'ime DVD discs.
The niile-na-otu software - Wondershare Video Ntụgharị, nwere ike ịbụ nhọrọ kasị mma maka gị. Ọ na-ike na ike video Ntụgharị na a ọkachamara DVD burner. Ọ bụrụ na ị ka chọrọ ọkụ VOB na Windows DVD Onye kere, ị nwere ike iji ya iji tọghata VOB ka a dakọtara usoro maka importing faịlụ ka Windows DVD kere ya. Otú ọ dị, ọ bụrụ na ị na-emetụta iji ọzọ DVD ọkụ ngwá ọrụ, ị nwere ike na-eme ka DVD si VOB faịlụ na otu usoro ihe omume. Ọ na-enye gị nza nke nhọrọ hazie mma DVD menu, dị ka 10+ free DVD menu template, n'okirikiri / Foto dị, ederede wdg, nakwa dị ka ọtụtụ edezi ngwaọrụ aka gị videos tupu DVD na-enwu, mgbe ahụ na-ahapụ gị ọkụ ọ bụla DVD diski (DVD9 na DVD5 gụnyere). N'ihi na DVD ọkụ, m anwa anwa ikwu, sị, a na ngwa bụ mma-ahọrọ karịa Windows DVD kere ya. Site n'ụzọ, ọ na-agba na Windows XP / Vista / Windows 7 / Windows 8.
Ọzọ, ị pụrụ izo aka n'isiokwu a n'okpuru ma tọghata VOB ka Windows DVD Onye kere akwado formats ma ọ bụ ọkụ VOB kpọmkwem site na iji oké omume.
Nkebi nke 1: Olee otú iji tọghata VOB ka Windows DVD Onye kere
Part 2: Olee otú kpọmkwem ọkụ DVD si VOB na a na ngwa
Wee na-esure VOB na Windows DVD Onye kere, converting VOB ka Windows DVD Onye kere akwado formats bụ mkpa nkwadebe. Mgbe ahụ, ị ​​nwere ike were were mbubata faịlụ ka Windows DVD Onye kere na-enweghị nsogbu ọ bụla.
Nzọụkwụ 1: Import VOB a Windows DVD Onye kere Ntụgharị
Ị nwere ụzọ abụọ mbubata VOB faịlụ ka ngwa a. Ị nwere ike ịhọrọ onye ọ bụla n'ime. Na otu onye bụ kpọmkwem ịdọrọ gị obodo VOB faịlụ a usoro; ndị ọzọ bụ pịa "Tinye Files" button na ndabara "tọghata" interface mbubata VOB faịlụ na ị chọrọ site na PC na ya.
Nzọụkwụ 2: Họrọ WMV dị ka mmepụta format
Ke "mmepụta Format" ebi ndụ, ị nwere ike see format image imeghe ya mmepụta format window. Na, na, na-aga "usoro"> "Video"> "WMV". WMV bụ otu n'ime formats na Windows DVD Onye kere akwado natively.
Nzọụkwụ 3: tọghata VOB ka Windows DVD Onye kere
Iji malite VOB ka Windows DVD Onye kere akakabarede, ị nwere ike pịa "tọghata" button na ala-nri n'akụkụ nke a interface ime ya. A mgbe e mesịrị, mbubata mmepụta faịlụ ka a ngwa na-ọkụ VOB na Windows DVD kere ya.
Isure DVD ozugbo na a na ngwa, ị nwere ike na-ezo aka zuru ezu nzọụkwụ n'okpuru. Ọ bụ nnọọ mfe.
Nzọụkwụ 1: Import VOB faịlụ
Tinye n'ime ya "Ọkụ" interface kama nke "tọghata" interface site na ịpị "Ọkụ" taabụ ke n'elu. Na, na, mbubata VOB faịlụ na ị chọrọ ke otu ụzọ n'elu.
Nzọụkwụ 2: hazie a DVD menu ma ọ bụ dezie videos
Tupu DVD ọkụ, ị nwere ike họrọ dezie gị VOB faịlụ ma ọ bụ. Ịbanye ya editting window, dị nnọọ pịa Dezie na onye ọ bụla video item mmanya.
Hazie a DVD menu, ị nwere ike họrọ otu DVD menu template si ya n'ọbá akwụkwọ site ọkụkụ ịgbanwe Template nhọrọ wee tinye ọkacha mmasị gị ọcha dị ka ndabere music, foto, ederede na na.
Nzọụkwụ 3: Malite na-esure DVD
Mgbe ihe niile bụ ihe ok, dị nnọọ fanye a ide DVD5 ma ọ bụ DVD9 diski na pịa apa ọkụ bọtịnụ na ala-nri akuku nke interface na-amalite na-ere ọkụ DVD si gị VOB faịlụ. Ị ga-enweta a dere DVD diski a nkeji ole na ole mgbe e mesịrị.
Olee otú iji tọghata na Ọkụ iPlayer ka DVD
> Resource> DVD> Windows DVD Onye kere Ga-Ọkụ VOB? Ngwọta